Yunaayitid Isteetis keessaa namoonni 15.3 ol COVID-19n erga qabamanii bood talaallii amansiisaa fi milkaa’ina qabu uummaaaf dhiyeessuutti dhiyaattee jirti. Fayyadama yeroo hatattamaa talaallii Kampanii dawaa oomishu guddichaa Fiizer fi kan Jarmanii BioNTch-n qophaa’eef eeyama kennuu ykn mari’achuuf jecha bulchiinsi nyaataa fi dawaa Ameerikaa har’a wal ga’ii addaa godhachuuf jiru.
Koreen talaallii kanaaf oomisha saayinsiif gorsaa ta’e akka eegame eeyama yeroo hatattamaa akka kennuuf marii geggeessa yoo ta’e bulchiinsi nyaataa fi dawaa biraa hanga jimaata ykn sambataatti eeyama isa dhumaa kennuu danda’a.
Itti aansees battala mootummaan feeraalaa talaallii miliyoona 6.4 guutummaa Yunaatitid Isteetistti kan ergu yoo ta’u talaallii jalqabaaf ilaalchis kan kennamuuf hojjettoota eegumsa fayyaa ta’uuf jiru.
Waraanni Ynaayitid Isteetis immoo talaallii Faayizer fi BioNTech baay’inni isaa doosii 44,000 gad ta’eef miseensota isaa hojjettoota eegumsa fayyaaf dursa kan kennu ta’uu beeksisee jira.
Dubbi himaan Ministrii ittisaa kan Pentagon tuuta oduuf roobii kaleessaa ibsa kennaniin bulchiinsi nyaataa fi dawaa eeyama yeroo hatattamaa erga raggaasisee booda talaalliin guyyaa tokko ykn lama keessatti ni eegala. Jalqaba irra fedha ofiin kan kennamu yoo ta’u talaalliin sun guutummaan eeyama erga argatee booda garuu dirqee ta’uu danda’a jedhan.
Wal ga’iin kamisa har’aa kan geggeessamu Ameerikaan erga weerarri vaayiresii koronaa biyyattii keessatti argamee namoota 3,000 ol guyyaa tokkotti du’uu isaanii gabaasuu iseetti aansee ti.
Kampaniin dawaa Faayizer fi BioNTech talaallii COVID-19 oomishuf sadarkaa addunyaatti tattaaffii sadarkaa addunyaatti adda durummaan geggeessaa jira. Dhaabbati to’annoo dawaa fi kan eegumsa fayyaa talaallii sana raggaasisee guyyoota hanga tokko booda biyyi Briteen Kibxata darbe uummataaf talaallii kana kennuu kan jalqabde biyyootii gama dhiyaa keessaa isee jalqabaa taatee jirti.